China Kumba mudziyo dhizaini Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Dhizaini yekushandisa pamba ndeyekuvandudza kutaridzika uye mukati memidziyo yemumba. Inosanganisira dhizaini yezvipurasitiki zvikamu nesimbi zvikamu.
Mazuva ano, zvinodiwa nevanhu zvemidziyo yemumba hazvisi zvekungoshanda chete, asi zvakare zvekushongedzwa zvinodiwa zveakasiyana, akasarudzika uye ehunyanzvi chitarisiko.
Dhizaini yemidziyo yemagetsi midziyo yakavakirwa pane epurasitiki nesimbi zvinhu, zvakasanganiswa nevanhu pfungwa yekushongedza uye chigadzirwa chinoshanda chimiro, uchishandisa 3D dhizaini software kugadzira chimiro uye chimiro chechigadzirwa, uye pakupedzisira kuburitsa madhirowa eforoma uye zvikamu zvigadzirwa.
Mestech inopa vatengi neinotevera imba yemagetsi chigadzirwa dhizaini uye kugadzirwa:
(1) Midziyo yemumba mega: kunyanya kusanganisira bvudzi rinoomesa, shavha yemagetsi, musoro wesimbi yemagetsi, bhurosi remazino emagetsi, chiridzwa chemagetsi chemagetsi, masaja emagetsi, nezvimwe.
(2) Kushandisa pachako zvigadzirwa zvemadhijitari: kunyanya mahwendefa emakomputa, maduramazwi emagetsi, michina yekudzidza muchindwe, michina yemitambo, makamera edhijitari, zvigadzirwa zvedzidzo zvevana, nezvimwe.
(3) Midziyo yemumba: kunyanya inosanganisira odhiyo, hita yemagetsi, humidifier, yekunatsa mweya, yekupa mvura, bhero repasuo, nezvimwe.
Imba zvigadzirwa zvemagetsi zvigadzirwa
Mutambo wemuchindwe wemutambo
Yevana izwi rekudzidza muchina
Mhuri digital purojekita
Dhizaini maficha emidziyo yemagetsi emagetsi
1.Ikugadzirwa kwemidziyo yemagetsi zvigadzirwa ndiko kutaridzika dhizaini, iyo yakazara dhizaini dhizaini uye dhizaini yezvimwe zvikamu. Kusiyana nemidziyo yekumaindasitiri,
(1) Simbisa dhizaini yekuonekwa kwechimiro, hunhu uye hunhu.
(2) Simbisa ruzivo rwevashandisi. Zvakadai sekusununguka mashandiro, nyore kutakura, munda isapinda.
Tarisa pane saizi, vhoriyamu uye huremu hwechigadzirwa unit.
(4) .Usually shongedza zvigadzirwa 'kutaridzika nerubatsiro rwekugadzirwa, electroplating, kupenda, silika skrini uye kumwe kurapwa kwepamusoro maitiro.
2.Nekuda kwekubatana kwemazuva ese nemuviri wemunhu, midziyo yemagetsi yemumba ine yakasimba kuchengetedza zvinodiwa
(1). izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa hazvikuvadze kumuviri wemunhu Kune matatu marudzi emiyero yeRoHS, inosvika uye 3C muChina. Zvinhu zvinokuvadza zviri mumiyero yezvikamu zvechigadzirwa
(2) Magetsi emagetsi haafanire kuve pamusoro pechengetedzo inogamuchirwa nemuviri wemunhu Mwaranzi yemagetsi inogona kukanganisa hutano hwevanhu. Zvigadzirwa zvemagetsi, kunyanya zvigadzirwa zvekutaurirana zvinovimba nemasaini asina waya, zvichaburitsa mwenje wemagetsi. Mukugadzirwa kwezvinhu zvakadaro, zvinodikanwa kudzikisa kukosha kwemagetsi emagetsi kune yakachengeteka renji.
(3) Kuchenesa magetsi: kwemimwe midziyo yemumba ine yakakwira kushanda voltage (AC), anti leakage, kuputira kana dhizaini isina mvura inofanirwa kugadzirwa mukugadzirwa kwechigadzirwa kudzivirira njodzi dzekuchengetedza.
Mestech inopa vatengi neOEM dhizaini, kugadzirwa kweforoma, kugadzirwa kwezvikamu uye kuungana kwezvinhu zvakajairika zvemagetsi zvigadzirwa. Tariro kuti vatengi vanoda kubatika nesu, isu tinokupa yedu yakanaka sevhisi.
Pashure: Yemagetsi edzimba dhizaini
Zvadaro: Chipurasitiki chigadzirwa dhizaini
Medical epurasitiki jekiseni muforoma uye kuumbwa
Mapepa epurasitiki etambo netambo